‘हामीलाई पटक-पटक अग्निपरीक्षा लिने राम बन्न मञ्जुर छैन’
१५ जनवरी १९१९ मा हत्या गरिएकी जर्मन मार्क्सवादी दार्शनिक रोजा लक्जमवर्गले भनेकी थिइन्, 'जुन दिनदेखि महिलाहरूको श्रमको हिसाब किताब हुन्छ, हाम्रो इतिहासको सबभन्दा ठूलो ठगी पक्राउ पर्नेछ । हजारौँ वर्षदेखिको त्यो ठगी, जसमा महिलाहरूले अनेकौँ घरेलु श्रम गरे । तर, यसको न कुनै मूल्य पाए, न श्रमको सम्मान नै ।'
'नारीवादी अर्थशास्त्र'का संस्थापक, डेम मार्लिन जोय वारिङले एउटा टेड-सोमा बोल्दै बेतलबी घरेलु महिलाको श्रमको अर्थशास्त्रमा (जुन विषय बच्चाको जन्म, भरणपोषण र भोजनसँग सम्बन्धित छ) भनेकी छन्, ‘के तपाईंलाई थाहा छ, तपाईंले आफ्नो बच्चालाई दूध खुवाउनुभएको दूध जीडीपीको अंश होइन । गाई, भैँसी, भेडा, बाख्राको दूध जीडीपीमा गणना गरिन्छ तर तपाईंको होइन ।'
गत वर्ष सेप्टेम्बरमा भारतको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले जारी गरेको २०१९ को रिपोर्टअनुसार एक भारतीय महिलाले दिनको २४३ मिनेट वा ४ घण्टा घरेलु काम गर्छिन् । जबकि एक भारतीय पुरुषको औसत समय २५ मिनेट मात्र हुन्छ । यसको मतलब पुरुषले आधा घण्टाभन्दा कम समय मात्र घरेलु काममा खर्चिन्छ । नेपाल र भारतको सामाजिक परिवेश लगभग एउटै भएको आधारमा भन्ने हो भने नेपालमा पनि यो तथ्यांक मेल खान्छ ।
जब हामी कुनै पनि श्रमको कुरा गर्छौं, हाम्रो मस्तिष्कमा ‘मेन एट वर्क’ आउँछ । सार्वजनिक स्थलमा चाहे त्यहाँ आधाभन्दा बढी महिला नै काम गरिरहेका किन नहुन् कहीँ पनि तपाईंले ‘वुमन एट वर्क’ लेखेको देख्नुभएको छ ? तपाईंले कुनै बच्चालाई तिम्रो आमा के गर्नुहुन्छ भनेर सोध्नुभयो भने प्राय: आउने उत्तर हो- केही गर्नुहुन्न, घरमै बस्नुहुन्छ । अर्थात्, हाम्रो समाजमा घरको कामलाई काम मानिँदैन, कुनै महत्त्व दिइँदैन । बुबा अफिस जानुहुन्छ, आमा केही गर्नुहुन्न ।
हाम्रो समाजमा प्राय घरमा पुरुषभन्दा पहिला महिला उठ्छन् । बिदाको दिनमा पुरुष सदस्यले तास खेलेर बिताउँदा आमा दिनभरि, कपडा धुने, खाना पकाउने, परिवारका व्यक्तिको हेरचाह गर्ने काममा व्यस्त हुन्छिन् तर यो श्रम कतै रेकर्ड हुँदैन, न त्यसको ज्याला हुन्छ न कुनै सम्मान । यदि कुनै महिलाले धेरै कामको चापले गलेको गुनासो गरिन् भने सबैको उत्तर एउटै आउँछ- 'दिनभर घरमा बसेर तिमीले के गर्‍यौं ?'
केही समयपहिले भारतीय संसद्‍मा महिलाको घरेलु श्रमलाई जीडीपीसँग जोड्ने विषय उठेको थियो । कुनै पनि श्रम सित्तैमा हुनुहुँदैन र महिलाले पनि आफ्नो श्रमको मूल्य प्राप्त गर्नुपर्छ भनेर केही सांसदहरूले आवाज उठाएका थिए । तर, त्यसमा धेरै छलफल भएन किनभने यो देशका लागि त्यस्तो आवश्यक प्रश्न थिएन ।
मानौँ, तपाईं कुनै कार्यालयमा काम गर्नुहुन्छ भने त्यसको बदलामा तपाईंले केवल तलब मात्र पाउनु हुन्न । तपाईंले गरिरहनुभएको श्रम देशको जीडीपीमा गणना भइरहेको हुन्छ । त्यसको अर्थ हो- तपाईंको श्रम देशको अर्थव्यवस्थामा अङ्कित भइरहेको छ । त्यसमा देशको श्रम कानुन लागू हुन्छ । तपाईं विभिन्न प्रकारका बीमा, भत्ता आदि पाउनुहुन्छ । किनकि तपाईंको श्रम जीडीपीमा सामेल छ । तर, देशको आधा हिस्सा ओगट्ने महिलाको घरेलु श्रममा कुनै कानुनी सेवा सुविधा लागू हुँदैन किनभने त्यो श्रम जीडीपीको हिस्सामा समावेश छैन ।
मार्लिनले सन् १९८८ मा लेखेको पुस्तक 'इफ वुमन काउन्टेड'मा पहिलो पटक महिलाको घरेलु र पैसामा हिसाब नगरिएको श्रम जीडीपीको हिस्सा भएको खण्डमा कुनै पनि देशको अर्थ व्यवस्थामा कस्तो परिवर्तन हुन्छ र समाजमा महिलाको सामाजिक-आर्थिक स्थितिमा कस्तो सुधार आउँछ भनेर विस्तृतमा व्याख्या गरिएको छ । मार्लिनका अनुसार सबै महिलाको नि:शुल्क घरेलु श्रम एक ठाउँमा जोड्ने हो भने त्यो संसारका सबै शक्तिशाली देशको सम्पूर्ण जीडीपीको बराबर हुन आउँछ ।
अब हामीलाई पनि पटक-पटक अग्निपरीक्षा लिने राम बन्न मञ्जुर छैन
यो सामाजिक सञ्जालले नेपालमा प्रतिभा भएका तर त्यसको प्रस्फुटन गर्न मौका नपाएका धेरै नेपालीहरूलाई एउटा गजबको 'प्लेटफर्म' दिएको छ । खासगरी नेपालका महिला प्रयोगकर्ताले आफ्नो अभिनय क्षमता यो सञ्जालमा राम्रै प्रयोग गरेका छन् । गत महिना एउटा भिडियो क्लिपले मेरो ध्यान खिच्यो । प्रसंग बिहेको थियो । हाम्रो समाजमा एउटा चलन छ, विवाहका लागि 'केटी हेर्न जाने' । तर, त्यो भिडियोमा ठीक उल्टो देखियो । केटी आफ्ना बाबुआमासँग केटा हेर्न गएको । केटाले पनि लजाउँदै केटीलाई चिया दिएको र छेउमा शीर निहुराएर उभिएको ।
यो विषयलाई एकछिन रोकेर १८ जून २०१२ को चर्चा गरौँ ।
जुन १८ २०१२, मा अमेरिकाकाको मिसिगनको लान्सिङमा साँझपख सयौँ मानिस भेला भए । उनीहरू भेला हुनुको उद्देश्य थियो- एघार महिला सांसद्‍द्वारा हुन गइरहेको Vagina Monologues सुन्न । उनीहरूमध्ये केही प्रदर्शनकारीले बोकेका पोस्टरमा लेखेको थियो- 'Vaginas brought you into the world and vaginas will vote you out.'
Photo : Doug Mataconis
गर्भपतनसम्बन्धी बहसमा लिसा ब्राउनले हाउसमा भजाइना शब्द प्रयोग गरेकोमा त्यो शब्द सेन्सर गरिएपछि त्यसको विरोधमा यो कार्यक्रम गरिएको थियो । ब्राउनलाई फेरि हाउसमा बोल्न अनुमति दिइएन ।
महिला हिंसा र दण्डहीनता अन्त्यको माग गर्दै महिला हिंसा रोक्न नसकिरहेको सत्तालाई प्रश्न गर्न हजारौँको संख्यामा भेला भएका साहसी नेपाली तरुण युवाले गत शुक्रबार सिंहदरबारअगाडि भेला भएर पृथ्वीनारायणको सालिकतिर चोरी औँला ठड्याउँदै एकै स्वरमा भने, ‘तिमी राम मन्दिर बनाऊ तर अब हामीलाई सीता बन्न मञ्जुर छैन । निरंकुश सत्तालाई चोर औँला देखाउँदै ‘हामी बोल्छौँ, हामी लेख्छौँ’ लेखिएको टिसर्ट लगाएका हजारौँ युवाले गाए- हाम्रा स्वरमा प्रतिबन्ध लगाउँदै, हाम्रा ओठमा ताल्चा झुण्ड्याउँदै, तिमी भन्छौँ- गाउन त गाऊ, तर यो गीत नगाऊ । हामी भने त्यही गीत गाइरहन्छौँ ।
त्यही कार्यक्रममा एउटा सशक्त महिला आवाज सुनियो- सम्भवतः नेपाली पितृसत्ताले पहिलो पटक सुनेको हुनुपर्छ यति शक्तिशाली आवाज । अग्ला दिवार र काँडेतारको सुरक्षा घेरामा रहेको नेपाली राज्यसत्ताको कानैमा पुगेर सत्ताको चार दिवार थर्कने गरी महिला हिंसाविरुद्ध लामो समयदेखि लडिरहेकी अभियन्ता हिमा विष्टले ‘हामी नै निर्मला पनि हौँ, भागरथी पनि हौँ, पटक-पटक हाम्रो बलात्कार भइरहन्छ तर हाम्रो चित्कार सुन्ने कोही हुँदैन भन्दै अंग्रेजीमा भनिन्, ‘माई भजाइना विल भोट यु आउट ।’ अर्थात् मेरो योनीले अब बलात्कारका मतियारलाई चुनावमा तिरस्कार गर्नेछ । महिलालाई भजाइनाबाहेक कहिल्यै व्यक्तिका रूपमा नदेखेको रुढिवादी नेपाली समाजलाई पच्ने कुरै भएन । उनीहरूले विष्टलाई अनेक आरोप लगाए ।
पाकिस्तानजस्तो कट्टरपन्थी र रुढिवादी समाजमा पनि महिलाहरूले आफ्नो हकहितका लागि आवाज उठाउँदै आएका छन्, जहाँ 'औरत कि सही जगह चादर और चार दीवारी में है’ भनेर महिलालाई अपमान गरिन्छ । त्यस्तो समाजबाट पाइने तमाम धम्की र अपमानका बाबजुद २०१८ मा पाकिस्तानमा महिलाहरूले सडकमा निस्किएर 'औरत मार्च' गरेका थिए । हम औरते नामको महिलाहरूको संगठनले निकालेको उक्त मार्चको नारा थियो ‘मेरा जिस्म, मेरी मर्जी’ (मेरो शरीर, मेरो मर्जी)
Photo : Akhtar Soomro/Reuters
रुढिवादी पुरुष मानसिकताले उक्त मार्चलाई पश्चिमाहरूको लहैलहैमा लागेर डलर खाएर गरिएको हो भनेर आलोचना गरे । सो मार्चमा प्रदर्शित केही तस्वीर अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा समेत चर्चामा आए । मार्चमा प्रदर्शित एउटा पर्चामा लेखिएको थियो ‘मुझे क्या मालुम तुम्हारा मोजा कहाँ है ?’ (तिम्रो मोजा कहाँ छ भनेर मलाई कसरी थाहा हुन्छ ? ) र ‘खुद खाना गरम कर लो’ ले धेरैको ध्यान खिच्न सफल भयो र यसले एउटा चाखलाग्दो बहस पनि सुरु गर्‍यो । त्यो नाराको अर्थ थियो अब महिलाहरूले भन्ने छन् यदि तिमी (पुरुष) आफ्नो खाना आफैँ गरम गर्न सक्दैनौँ भने उनी पनि तिम्रो ओछ्यान गरम गर्न बाध्य छैनन् ।
त्यो मार्च रोक्न मौलाना फजलुर रहमान लोहारको उच्च अदालतसम्म गए । अदालतमा पेस गरिएको याचिकामा भनिएको थियो कि यो मार्च इस्लाम धर्मको विरुद्धमा छ । तत्कालीन मानवअधिकार आयोगकी अध्यक्ष माजिदा रिजवीलाई पनि सो मार्चको समर्थन गरेको आरोपमा धम्की दिने र अपमानजनक व्यवहार गर्ने कोसिस गरियो ।
मुद्दाको फैसला गर्दै लोहार उच्च अदालतले भन्यो- कानुनअनुसार कसैलाई पनि शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा रोक लगाउन पाइँदैन । मैले यो प्रसंग यस कारण उल्लेख गरेको हुँ कि पाकिस्तान जस्तो मुस्लिम र रुढिवादले ग्रस्त मुलुकमा पनि महिलाले राज्य सत्तालाई ठूलो चुनौती दिए ।
२०१८ मा म दुबईको एउटा अर्ध-सरकारी कम्पनीमा काम गर्थें । मलगायत करिब ५०० नेपाली पनि त्यहाँ कार्यरत थिए । तीमध्येकी एक हुन्- यशोदा नकर्मी (नाम परिवर्तन) । हाम्रो दफ्तरमा क्लिनरको काम गर्थिन् । र, हामीलाई खाना पनि बनाएर खुवाउँथिन् । नेपाली भनेर चिनेपछि मैले उनीसँग कुरा गर्न सुरु गरेँ ।
तर, उनी प्राय: नबोली बस्थिन् । सोधेको प्रश्नको छोटो उत्तर दिने, अरू केही नबोल्ने । उनको व्यवहार कस्तो हुन्थ्यो भने कोही उनको नजिकै गयो भने पनि आत्तिएजस्तो गर्ने । एक दिन उनले आफ्नो कथा यसरी सुनाइन् । उनको घर सुनसरी चतरा हो । घरमा श्रीमान् र एउटा छोरी छन् । श्रीमान् कुनै नोकरी गर्दैनन्, तास खेल्ने र जाँड खाने पेसा गर्छन् । उनी सुनसरीबाट विदेश जान पहिलो पटक काठमाडौं आएको र त्यहाँबाट दिल्ली हुँदै दुबई आइपुगेकी हुन् । उनले पटक-पटक भनिन्, 'म छोरा मान्छेलाई पटक्कै विश्वास गर्दिनँ ।'
गाउँमै ७ कक्षासम्म पढेकी उनले ठूलो बजार देखेको भनेको इनरुवा थियो । पहिलोपटक काठमाडौं आएकी एउटी गाउँकी सोझी महिलालाई म्यानपावरमा काम गर्ने आफ्नै नाता पर्नेले एक महिनासम्म रातदिन बलात्कार गरे । काठमाडौंबाट उडेर दिल्ली पुगेपछि त्यहाँ दुई महिना बस्दा पनि हररात उनको बलात्कार भइरह्यो ।
दुबई आएर पनि उनको पीडा सकिएन । घरेलु कामदारका रूपमा आएकी उनले दुई वर्ष नर्कको जीवन बिताइन् । हरेक रात आफ्नो बुढो मालिकलाई शरीर सुम्पनुपर्ने र सुम्पिन नमान्दा कुटपिटको काम दैनिक दोहोरिइरह्यो ।
दुई वर्षसम्म उनले एउटै कोठामा बसेर नारकीय जीवन बिताइन् । सन् २०१७ मा उनका मालिक फ्रान्स बसाइँ सरेपछि मात्र उनलाई घर बाहिर निस्कन दिइएको थियो । अनेक हण्डर र ठक्कर खाएपछि बल्ल एउटा कुनै नेपालीले उनलाई क्लिनरको काम लगाइदियो । २०१९ को मध्यतिर मैले त्यो अफिस छोडेँ । गत डिसेम्बरमा बर दुबईमा भेट हुँदा उनले सुनाइन्- कोभिडको महामारीले उनले नोकरी गुमाइन् र कैयौँ दिनसम्म भोकभोकै सुतिन् । अहिले एउटा रेस्टुराँमा काम गर्छु । मिल्यो भने आगामी महिना नेपाल फर्कन्छु ।
मैले कयौँपल्ट उनलाई किचेनको कुनामा भक्कानिएर रुँदै गरेको देखेको छु । शायद उनी नेपाल फर्किइन् होला । उनले अब बाँकी जीवनभर एउटा मानसिक पीडा बोकेर बाच्नुपर्नेछ । यस्तो पीडा बोकेर बाँच्ने हजारौँ महिला छन्, अरबमा । ‘तर म यो कथा कसैलाई बताउन सक्दिनँ, श्रीमान्‌लाई पनि । किनभने उसले थाहा पायो भने नेपाल फर्कँदा न मेरो घर हुन्छ न इज्जत ।' उनको यस्तो विवश र लाचार आग्रह सम्झिँदा मलाई अहिले पनि पीडाबोध हुन्छ ।
गएको वर्ष गल्फ टाइम्समा एउटा समाचार छापियो । यूएईमा नेपाली महिलाको दुर्दशाबारेमा प्रकाशित त्यो समाचार झन् अत्यासलाग्दो छ । मध्यपूर्वमा घरेलु श्रमिकका रूपमा काम गर्ने महिलाको अवस्था अत्यन्त जोखिमपूर्ण छ । ४५ वर्षकी यामकुमारी थापा मानसिक सन्तुलन गुमाएको अवस्थामा दुबईको एउटा अस्पतालमा फेला परेकी थिइन् । मानसिक सन्तुलन गुमाएकी र अचेत अवस्थामा रहेकी थापालाई २०१९ को अक्टोबरमा कसैले एम्बुलेन्समा हालेर दुबईको रसदिया हस्पिटलमा ल्याएर छोडेको थियो । उनका कोही साथी र नातेदार फेला नपरेको र रोजगारदाता पनि यकिन हुन नसकेपछि अस्पतालले उनीबारे स्थानीयस्तरमा काम गरिरहेकी भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता लैला अबु बेकरसँग सहयोग माग्यो ।
प्राप्त पासपोर्ट प्रतिलिपि अनुसार उनी यूएईमा केही वर्षदेखि कुनै एउटा घरमा घरेलु श्रमिकको रूपमा कार्यरत थिइन् । तर, अधिकारीहरूले उनको रोजगारदाता पत्ता लगाउन सकेनन् । सामाजिक कार्यकर्ताका लैला अबु बेकरका अनुसार थापा नेपाली, हिन्दी र अरबी भाषा बोल्न सक्थिनँ ।
तर, उनलाई आफ्नो कामको ठेगाना र आफ्नो घरपरिवारबारे केही याद थिएन । स्थानीय मिडियामा उनका विषयमा समाचार आएपछि दुबईमा रहेका नेपालीले उनको फोटो फेसबुकमा राखिदिए । फेसबुकमा फोटो राखिएको केही घण्टामै थापालाई चिनेका दुई व्यक्तिले पोर्चुगल र नेपालबाट सन्देश पठाए । 'उहाँ मेरी आमा हुनुहुन्छ, कृपया उनलाई नेपाल फर्कन सहयोग गर्नुहोस्', सन्देशमा लेखिएको थियो । नेपाली दूतावासको सहयोगमा पछि थापा नेपालको आफ्नो घर गोरखा फर्किन् ।
हिमा विष्टले ‘माई भजाइना विल भोट यु आउट’ भन्दा नेपालको पुरुष राज्यसत्ताले त्यसको अर्थ नबुझी ट्याउँट्याउँ गर्ने आइमाई, अश्लीलताको पराकाष्ठा र एनजीओको खेती भनेर अनेक आरोप लगाए । म समाजशास्त्र वा मानवशास्त्रको विद्यार्थी होइन, मानिसको चरित्रको दुरुस्त चित्रण गर्न जान्दिनँ । तर, मैले सिकेको एउटा कुरा यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु ।
एउटा सुपर मार्केटमा सपिङ गर्न गएका मानिस घण्टौँ लगाएर सामान रोज्छ र किन्छ । तर, जब त्यहीँ मानिस पैसा तिर्न काउन्टरमा पुग्छ, १० मिनेट पनि पर्खन गाह्रो मान्छ । किनभने त्यहाँ उसले पैसा तिर्नुपर्छ । अर्थात्, आफूसँग भएको केही गुमाउनुपर्छ । आफूसँग भएको केही गुमाउन चाहँदैन मान्छे । ठ्याकै यही मनोविज्ञान हो नेपाली पुरुषसत्ताको । आफूले भोगचलन गरेको अलिकति अधिकार महिलालाई दिनुपर्ला भनेर पितृसत्ता जहिल्यै झस्कन्छ, आनाकानी गर्छ र सकेसम्म दबाउन खोज्छ ।
मैले धेरै वर्ष 'कस्टमर सर्भिस' मा काम गरेँ । कस्टमर सर्भिसमा काम गर्नेलाई प्राय: सिकाइन्छ ‘Put yourself in your customer's shoes. (आफू कस्टमर भएर उसको ठाउँमा आफूलाई राखेर हेर) तिमी आफू कस्टमर भएर गयौ भने तिमीले पनि त्यस्तै व्यवहार गर्छौं, जस्तो अहिले तिम्रो काउन्टरअगाडि उभिएको ग्राहकले गर्दछ । त्यसैगरी हिमा विष्टले तिमीलाई हामी चुनावमा तिरस्कार गर्छौं, भोट दिन्नौँ भनेकी हुन्, कुनै अश्लील होइन ।
नेपालमा महिलाहरूले उठाएका माग सामान्य छन् । उनीहरूले कुनै अलग राज्य वा पुरुषबिनाको राज्य अथवा राज्यको स्राेत र सम्पत्तिमा रजाइँ खोजेका होइनन् । उनीहरूले सडकमा उभिएर आत्मसम्मान मागेका छन् । निर्मला र भागरथीको हत्यारालाई कारबाही मागेका छन् । स्वतन्त्र घुमफिर गर्न पाउने अधिकार मागेका छन् । आफ्नो शरीर, आफ्नो अधिकार मागेका छन् । तिम्रो कट्टु, मोजा चस्मा र पर्स कहाँ छ, आफैँ सम्हालेर राख भनेका छन् । यो कुनै पूरा गर्न नसकिने माग होइन । कस्तो कपडा लगाउने, के खाने, के बोल्ने त्यो उनीहरूको जन्मसिद्ध अधिकार हो ।
तर, महिलाहरूले उठाएका यी तमाम मुद्दालाई अभिमान र अहंकारले भरिएको पितृसत्ता सुन्नै चाहँदैन- बरु सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन निर्देशिका जारी गरेर सरकार अधिनायकवाद लाद्ने कोसिस गर्दै छ । सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापनका नाममा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नै कुण्ठित गर्ने मनसायले विवादास्पद सूचना प्रविधि विधेयक ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । सामाजिक सञ्जालमा आउने सरकारविरोधी आवाज दबाउन र कारबाहीको दायरामा बाँध्ने तयारीविरुद्ध समयमै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षधर र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता विशेषगरी युवाहरू जागरुक हुन जरुरी छ ।
सिंहदरबार मार्चमा सहभागी महिला आन्दोलनकारीलाई सामाजिक सञ्जाल, फोन र इमेलबाट धम्की आउन थालेको समाचार आएको छ । पितृसत्ताको मानो खाएर डकार लिँदै बसेका केही तत्त्वहरूले सामाजिक सञ्जालमा घृणायुक्त सन्देश फैलाउने, ट्रोलिङ र अनलाइन दुर्व्यवहार गर्नुका साथै व्यक्तिगत रूपमै ज्यान मार्ने र बलात्कारको धम्की दिने निन्दनीय, आपत्तिजनक व्यवहार सुरु गरेका छन् । महिला र सीमान्तकृतमाथि थुपारिएको कुण्ठित सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, कानुनी मान्यता र विभेदलाई समाप्त पार्न हाम्रा आवाज जोडदार रूपमा उठ्न जरुरी छ ।
निर्मला पन्तदेखि भागरथी भट्टसम्म आइपुग्दा करिब ३४०० किशोरी र बालिका बलात्कारको सिकार भएका छन् । बैतडीकी पूजा बोहराको सामूहिक बलात्कार, काभ्रेको तेमाल गाउँकी नाै वर्षीया एलिसा तामाङको बलात्कारपछि हत्या, धनुषाको जनकपुरधाम कुर्थाकी नाबालिका कञ्चनकुमारी पञ्जियारको बलात्कारपछि हत्यादेखि पोखरा महानगरपालिकाकी ७० वर्षीय वृद्धा बलात्कारको शिकार भएको घटनाले नाबालकदेखि वृद्धासम्म कोही पनि महिला नेपालमा सुरक्षित छैनन् भन्ने देखाउँछ ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन २०७५/७६ अनुसार बलात्कारका ३१८४ वटा कुल मुद्दामा १०१० वटामा मात्रै कसुर कायम भएको देखिएको छ । अपराध अनुसन्धानमा संलग्न अनुसन्धान अधिकारी, अभियोजनमा संलग्न रहने सरकारी वकिल तथा कर्मचारीको लापरबाही र फितलो अनुसन्धानले धेरै बलात्कारका मुद्दामा पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन् ।
म पितृसत्ताका सुसारे, चाकर, धाइआमा र धाइबाबाहेकका तपाईंहरूलाई सोध्न चाहन्छु- हरेक दिन नेपालमा छ जना महिला यौन दुर्व्यवहारको सिकार हुन्छन् । कुनै तपाईंकै चेली, बहिनी अथवा छिमेकी होलिन् । कुनै एउटा बलात्कृत चेलीले भोलि तपाईंलाई बाटोमा अचानक भेटिन् र सोधिन्- यो राज्यसत्ता, सामन्ती संस्कारले त मलाई बाँच्न दिएन, राज्यले हेरेन तर तपाईं आफूलाई एउटा चेतनशील नागरिक हुँ भन्नुहुन्छ भने तपाईंले हाम्रा लागि के गर्नु भयो ? म तपाईं जिम्मेवार नागरिकबाट यसको जवाफ चाहन्छु ।
निर्मला र भागरथीहरू त यो घृणित संसार छोडेर गइसके । यो समाजको छिछि दूर दूर सहेर, अमिलो आँसु पिएर बाचेका सयौँ पीडितको अवस्था के छ ? चाहेर पनि उनीहरू कानुनी उपचार खोज्न सकिरहेका छन् कि छैनन् ? उनीहरूले यो समाजमा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने कि नपाउने ? तपाईं आफूलाई चेतनशील नागरिक मान्नुहुन्छ भने यसको जवाफ तपाईंले दिनैपर्छ ।
केही समयपहिले मलाई एक जनाले सामाजिक सञ्जालमा सोधेको एउटा प्रश्न म यहाँ राख्न चाहन्छु । अहिले त महिलाले सत्तालाई चोरऔँला मात्र देखाएका छन् । भोलि सिंहदरबारअगाडि उभिएर हजारौँ, लाखौँ महिलाले आफ्ना भित्री वस्त्र खोलेर देखाइदिए भने यो पितृसत्ता र त्यसका मतियारहरूले आफ्नो अनुहार कहाँ लुकाउँछन् ?
केही समयपहिले दैनिक बलात्कारको समाचारबाट आजित भएर लेखिका सिवानीसिंह थारूले 'अब महिलाहरूले बलात्कारीको लिङ्ग छेदन गर्ने दस्ता बनाउनुपर्छ' के भनेकी थिइन्, पितृसत्ताका ठेकेदारहरूले उनलाई तथानाम गाली मात्र गरेनन्, हत्तपत्त आफ्नो सुरुवाल यसरी माथि ताने कि मानौँ, सिवानीले उनीहरूको नियत थाहा पाएर हतियार बोकेर काट्न आउँदै छिन् ।
अब यो देशका शहरदेखि गाउँ र दूरदराजका सम्पूर्ण महिला एकजुट हुनुपर्छ । अब को प्रतिगमनकारी र को अग्रगामी होइन, जो सत्तामा छन् र जो सत्ताको लोभमा अहिले सडकमा छन्, दुवै प्रतिगमनकारी र पितृसत्ताका ठेकेदार हुन् । अहिले उनीहरू गोहीको आँसु चुहाउँदै छन् । सत्तामा पुगेपछि फेरि तपाईंलाई दासजस्तो व्यवहार गर्छन् । तपाईंलाई साथ दिन, हिम्मत र आँट भएका हामी पुरुष पनि तपाईंको आवाजमा आवाज मिसाएर भन्न तयार छौँ, हामी तिम्रो सत्ताको दास होइनौँ ।
सामाजिक सञ्जालमा महिला आन्दोलनलाई समर्थन गरेको आरोपमा हामीलाई पनि डलर खाएर लेखेको, पश्चिमाको एजेन्डा बोकेको, जोइटिङ्ग्रे भएको लगायत अनेक उपनाम दिने सम्पूर्ण पितृसत्ताका ठेकेदारलाई म सुनाउन चाहन्छु, कान खोलेर सुन- महिलालाई पनि मानिस जस्तो व्यवहार गर, उनीहरूलाई पनि बाँच्न देऊ, यौन दुर्व्यवहार बन्द गर, अपराधीलाई कारबाही गर भन्दा हामी जोइटिङ्ग्रे, डलरे वा पुच्छर हुन्छौँ भने हामी त्यो आरोप जीवनभर सुन्न तयार छौँ ।
सञ्जीवनी, हिमा र सामनाहरूले भनेजस्तै अब उनीहरूलाई मात्र यो युगको अपमानित सीता बन्न मञ्जुर होइन, अब हामी पुरुषलाई पनि पटक-पटक अग्नि परीक्षा लिने राम बन्न मञ्जुर छैन ।
फेरि एक पटक टिकटकको भिडियोबारे कुरा गरौँ । एक्काइसौं शताब्दीका तरुण महिलाहरू तपाईं आफैँ सक्षम हुनुहुन्छ । अब यो पितृसत्ताको केटी हेर्ने रीतलाई बदल्नुस् । अब तपाईंले विवाह गर्ने केटा व्यावहारिक छ कि छैन, तपाईंलाई किचेनको काममा सघाउन जान्दछ कि जान्दैन ? त्यो हेर्नुस् र तपाईं छान्नुस् । अब तपाईंलाई हेर्न केटा आउने चलन फेर्नुस् ।
किचेनमा पसेर चिया पनि बनाउन नजान्ने, घरको काम गर्ने ढंग नभएको, आफ्नो मोजा, पर्स र चस्मा कहाँ राखे भने हेक्का नभएको, शौचालय गएर फ्लस गर्न नजान्ने, आफ्नो खाना आफैँ तताएर खान नसक्ने मानिसलाई तपाईं अस्वीकार गर्नुस् । अल्बर्ट आइन्स्टाइनले भनेका छन्, ‘हामीले सृष्टि गरेको संसार हाम्रो सोचको प्रक्रिया हो । हामीले हाम्रो सोचाइ नबदलेसम्म यो परिवर्तन हुँदैन । र, सोचबाट नै परिवर्तनको सुरुवात हुन्छ ।'
तसलिमा नसरिनले आफ्नो पुस्तक 'आइमाईको हकमा ' एक ठाउँमा जुम्राको प्रसंग उल्लेख गरेकी छन् । महिलामाथि हुने विभेद, शोषण, दुर्व्यवहार र अत्याचारलाई उनले जुम्रासँग तुलना गर्दै भनेकी छन्, 'महिलाले यसलाई आफ्नो टाउकोमा जुम्रा जसरी बोकेर हिँडेका छन् ।' दुर्व्यवहार, उत्पीडन र विभेद रूपी जुम्राले टाउकोमा गुड लगाउँदा पनि महिलाहरू जुम्राको टोकाइ सहेर बसेका छन् । तर, कुनै दिन कसैले यो जुम्रा हटाउन पर्छ भन्यो र त्यो जुम्रा हटाइदियो भने महिलाहरू एक्कासि बिरामी हुन्छन् । किनभने उनीहरूले त्यो अन्याय, अत्याचार र शोषणको जाँतो हजारौँ वर्षदेखि सिरमा बोकेर हिँडेका छन् । र, त्यसमा बानी परिसकेका छन्, अत्याचार सहने आदत लागिसकेको छ ।
तपाईंहरूले पनि देख्नुभएकै छ, आफूलाई पढे लेखेका भन्ने महिलाले पनि सामाजिक सञ्जालमा महिलाविरुद्ध हुने भेदभाव, अत्याचार, दुर्व्यवहार र शोषण हटाउनुपर्छ भन्दा विरोध गर्ने, 'म खुट्टाको पानी खान्छु', 'त्यो हाम्रो संस्कृति हो', तिमीहरूलाई किन चासो भनेको पनि सुन्नुभएकै छ । त्यो भनेको त्यही जुम्राले गुँड बनाएको टाउको बोकेर हिँडेको जस्तै हो ।
हजारौँ वर्षदेखि जुम्रा रुपी जाँतो शिरमा थापेर जुम्राको टोकाइ सहेर बस्ने बानीको कारणले हो । तसर्थ कसैले जुम्रा निकाल्नुपर्छ भन्यो वा जुम्रा निकालिदियो भने उनीहरूले अप्ठ्यारो मान्ने, असहज महसुस गर्ने र हाम्रो धर्म वा संस्कृति हो भनेर प्रतिवाद गर्न खोज्छन् ।
अन्त्यमा, सञ्जालमा तथानाम लेख्ने, महिलालाई होच्याउने महिलाविरोधी पुरुष राज्यसत्ता र त्यसका समर्थकलाई म सामना मिश्रले ट्वीटरबाटै दिएको एउटा हाँक सुनाउन चाहन्छु, 'बहस गर्न विचार बोकेर आउनुस्, पितृसत्ताले दिएको शक्तिले रन्थनिएको कुण्ठा बोकेर होइन ।'
प्रकाशित मिति: मंगलबार, फागुन ११, २०७७, १४:०३:००